Wasaaradda Maaliyadda Dowladda Puntland oo go’aano kasoo saartay lacagta Shillin Soomaaliga(Wareegto) – Wasaaradda Maaliyadda
Wasaaradda Maaliyadda Dowladda Puntland oo go’aano kasoo saartay lacagta Shillin Soomaaliga(Wareegto)
January 21, 2021	in War-saxaafadeed, Warka
GAROOWE – Wasaaradda Maaliyadda Dowladda Puntland ayaa soo saartay go’aan lagu xakamaynaayo lacagaha laysaga safriyo Gobolada kala duwan ee Puntland.
Wasiir kuxigeenka Dakhliga Wasaaradda Maaliyadda Puntland Mudane Cabdi Ibraahim Warsame “Qawdhan” warqad qoraal ah oo ka soo baxaday Xafiiskiisa Dakhliga ayaa amar lagu siiyay baraha kantarool ee Puntland.
In uusan u kala gudbi karin gaadiid wada lacag Sh.s gobolada kale.
In la baaro gaadiidka lana hubiyo badeecadda iyo wax kasta oo ay sidaan.
In gaarigii lagu qabto Sh.so, lagu soo xareeyo saldhigga amniga ugu dhow si loo mariyo sharciga.
Qoraalkan ka soo baxay Xafiiska Dakhliga Wasaaradda Maaliyadda ayaa qayb ka ah tallooyinkii Guddigii dhowaan loo saaray ka tala bixinta saraifka lacagaha.
Wasiirka Maaliyadda Puntland oo ka qaybgalay kulan looga hadlay dhaqan gelinta go’aamadii kasoo baxay Dowladda(Sawirro)
Madaxweynaha Puntland oo Guddi u magacaabay cabashooyinka la xiriira Shillin Soomaaliga